५० लाखभन्दा बढी फलोवर्स भएका मार्समेलो प्रस्तुतिको प्रबन्ध ठगीको धन्दा कि के ? - Celebrity Nepal
विख्यात अमेरिकी डीजे मार्समेलो नआउँदा बुधबार मध्यरात नारायणहिटीपथस्थित ‘क्लब डेजाभु’ रणभूमि बन्यो। मार्समेलोजस्तै देखिने हुलियाको खोजी भइरहेको छ। उनको नाम बेचेर दुई करोड ठगी गरिएको प्रहरीको दाबी छ। नाइट क्लब डेजाभुमा पूर्वनिर्धारित समयमा ६ घन्टासम्म कुर्दा पनि डीजे मार्समेलो नआएको आयोजकले मध्यरात जानकारी दिएपछि दर्शकहरूले तोडफोड गरेका हुन्। भागाभाग भयो। उनलाई ल्याउने भन्दै महँगो टिकट बिक्री गर्नमा संलग्न भएको अभियोगमा सात जना अहिले ठगी अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिवेश लोहनी भन्छन्, ‘मार्समेलोको वास्तविक नाम के हो भन्ने नै थाहा भएन। कसले भन्न सक्छ वास्तविक नाम ? प्रस्तुति दिने समयमा कहाँ थियो ? उसको वास्तविक हुलिया आदिबारे अनुसन्धानकै क्रममा छौं।’
आजको अन्नपूर्णबाट जस्ताको तेस्तै
पोखरामा पुस ६ देखि पर्वतीय चलचित्र महोत्सव